Izvo murume waMutongi Judy akamutorera kwake kwegumi nemanomwe ekuberekwa - Nhau
Kuru Macelebs Nhau Blog Varaidzo
Izvo murume waMutongi Judy akamutorera kwake kwegumi nemanomwe ekuberekwa
Mutongi Judy Sheindlin akasvitsa makore makumi manomwe nemanomwe musi waGumiguru 21 akaswera nemurume wake, mutongi pamwe naye Jerry Sheindlin.
TO TMZ cameraman akamhanyira mukati mevaviri ava pavakasiya hotera yeMontage Beverly Hills pazuva rake re-b - uko Judy muna 2013 akatenga imba inosvika mamirioni 10.7, mumwe wake dzimba zhinji kutenderera nyika - uye neushingi akabvunza kuti chii Jerry chakamutora kupemberera zuva rake guru.
Judy akakwenenzvera icho chakange chiri 'chakanakisa' chipo chakazotsanangidzirwa kuna cameraman weTMZ apo Jerry akashereketa akatarisa, 'Chaizvoizvo, [Jerry] akati kwandiri,' Unodei pazuva rako rekuzvarwa? Unogara uchindiomesera. Unodei?''
Ndiani mukomana waParis hilton
Uye ini ndakati, 'Ndinoda Aston Martin mutsva,' 'Judy akaenderera mberi. 'Iye ndokuti,' Ndeipi sarudzo yako yechipiri? ' Saka ndawana mbatya dzekugezera! '
David Crotty / Patrick McMullan kuburikidza neGetty Image
Asina chokwadi kana Emmy anokunda aiita jee, iye cameraman akabvunza, 'Wakave zvechokwadi?' iyo Jerry akapindura, 'Hongu, asi yaibva kuna Aston Martin!' ndokunongedzera pachipfuva chake, zvichiratidza kuti mbatya dzekugezesa dzakauya nekambani yemotokari yemhando yepamusoro yakashongedzwa pairi.
Vese Judy naJerry vakabvuma 'hazvisi nyore' kuwana chipo kumukadzi anacho chose.
Judy, chokwadika, haadi chaizvo chero anodhura zvipo. Aimbova mutongi wedare remhuri yeManhattan ane mambure akakosha anodarika madhora mazana mana emadhora. Muna 2017 chete iye akawana $ 147 miriyoni - $ 100M yeiyo yakabva mukutengesa raibhurari yake yeTV kuCBS uye yakasara yaive muripo wake wekugamuchira iye akabudirira 'Mutongi Judy' uye kugadzira imwe show inozivikanwa yepamutemo, 'Hot Bench.'
Hollywood Kwako / Nyeredzi Max / GC Mifananidzo
Asi Judy, ane kondirakiti yazvino anayo pabhenji kusvika kanosvika 2021, haana hurongwa hwekurega basa chero nguva munguva pfupi. 'Ini handitaridze kunge ndakura zvekukwanisa kuenda pamudyandigere,' akaudza TMZ. 'Ndiri kuda kushanda kusvika ndaneta.' Akawedzera kuti pamudyandigere 'hachisi chinhu changu,' achidambura, 'Ini handitambe gorufu.'
Kuzvidzivirira kwaMary J. Blige kunonzi kuri pakati pekurambana kwake kwakashata
Liam Hemsworth mafaira ekurambana naMiley Cyrus
vanilla ice ichiri kuroora here
chelsea peretti jorodhani peele mucheche
imarii makumi matatu nematatu yedhaimondi inokosha
nikki bella naJohn cena
ko khloe kardashian akashandisa kuonda
heidi klum uye inoisa mucherechedzo vana